यस पटकको चुनाव बुझ्नै सकिएन, मै पनि बालबाल बाँचे : देउवा – Todays Nepal
यस पटकको चुनाव बुझ्नै सकिएन, मै पनि बालबाल बाँचे : देउवा
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Mar 22, 2018
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावका बारेका पार्टीमा गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सभापति देउवाले चुनावको गहन समीक्षा र कमजोरीलाई सुधार गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै अहिलेको चुनावलाई आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो । ‘धेरै नेताहरु हार्नु भयो । नसोचेको भयो । हामीले चुनाव बुझ्नै सकेनछौँ । म पनि बालबाल बाँचे’, उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनावको समीक्षा गम्भीर भएर गर्न आवश्यक छ ।’ सभापति देउवाले केपी ओली सरकारको सय दिन नपुगी बोल्न उचित नभए पनि काम गराईको शैली हेर्दा सरकार
अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुदै गएको बताउनुभयो । ‘एक सय दिन नपुगी सरकारको कामको बारेमा बोल्नु हतार नै हो’, उहाले भन्नुभयो, ‘सरकारले दुई तिहाईको आडमा सत्ताको दुरुपयोग गर्न सक्छ । हामी सचेत हुनु पर्छ ।’सभापति देउवाले सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको त्यसलाई रोक्न सदन मात्र नभई सडक नै पनि तताउन परेपछि कांग्रेस तयार भएर बस्नु पर्ने बताउनुभयो ।
बुधबार नुवाकोटमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनपछि सभापति देउवाले कोषाध्यक्ष भेला जस्तै जिल्ला सचिव र जिल्ला सभापतिहरुको पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने बताउनुभयो । उहाँले महासमितिमा कोषाध्यक्षहरुलाई आमन्त्रितको रुपमा सहभागी गराउने योजना रहेको समेत बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिष्टहरुमा लोकतन्त्रको भर्‍याङ चढेर अधिनायकवादको शिखर चढ्ने चरित्र हुने भएकोले त्यो चरित्र अहिलेको सरकारमा पनि लागू भएको संकेतहरु देखा परिसकेको बताउनुभयो । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले आफूमा शक्ति केन्द्रिकृत गरिरहेका छन् । यसबाट कतै उनी सर्वसत्तावादतर्फ जाँदै त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसले नैतिक शक्तिले मान जनतामा स्थापित हुन सक्ने बताउनुभयो । ‘निर्वाचनमा हामीले हार्‍यौँ । यसको निर्मम समीक्षा हुनु पर्छ । फेरि हामी जनतामा लोकप्रिय हुनको लागि नैतिक शक्ति नै हो’, उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि नैतिक शक्ति नै हो । कांग्रेसको मूल्य, मान्यता र धर्म के हो ? त्यसको मनन गर्न जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले जनतामा कांग्रेसले एकताको सन्देश बोकेर पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनताको विश्वास जित्नको लागि केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मका नेता कार्यकतारु सक्रिय भएर जनतामाझ पुग्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व महामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले पार्टी पार्टीको विधान, नीति नियम अनुसार नचल्दाको परिणाम नै अहिलेको चुनाव भएको बताउनुभयो । ‘पार्टीमा व्यक्तिको पूजा गरेर अघि बढ्ने, संस्थागत हितको भन्दा पनि व्यक्तितर्फ अन्ध भएर लाग्ने गरिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीलाई संस्थागत बनाउनु पर्छ । विधानलाई अक्षरश: पालना गराउनु पर्छ ।’
कार्यक्रममा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्व महामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधी, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महत, सांसद बहादुरसिंह लामा, सांसद मोहन आचार्यलगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियोकांग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
शास्त्र भन्छ : महिलाले गर्नै हुदैन यी ९ काम अनर्थ हुन्छ (जान्नुहोस् ति के के हुन् )
फेसबुक लाईभमै आमा छोरीको टंग किस, हेर्नुहोस अर्चनाका आमाछोरीको चर्तिकला
टुडेज नेपाल	3days ago